JAWAARI oo lagu wado in maanta uu jeediyo khudbad xiisa gaara leh? - Caasimada Online
Home Warar JAWAARI oo lagu wado in maanta uu jeediyo khudbad xiisa gaara leh?
JAWAARI oo lagu wado in maanta uu jeediyo khudbad xiisa gaara leh?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ex Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis ah uu Khudbad xiisa leh ka jeediyo Xarunta Golaha Shacabka.
Jawaari, ayaa khudbadiisa maanta ku jeedin doona baaraarujin iyo baaqyo ku aadan in wada shaqeyn wanaagsan ay dhexmarto Xukuumada iyo baarlamaanka Somalia.
Khudbadaha oo badnaan doona ayaa intooda badan diirada lagu saari doonaa arrimaha baarlamaanka, iyadoo leysku weydarsanaayo tallooyin iyo baraarujin ayaa waxaa laga yaabaa in leysla dhaafo Duhurka maanta.